Koolu Galtoonni Afriikaa Galaanaan Liqimfaman
Guyyaa har’aa gara Yemenitti ce’uuf yaalaa kan turan lammiiwwan Itiyoopiyaa 180 beekaa gara galaanaatti darbamuu isaaniif hanga ammaatti namoonni 19 du’uu jarmayaan koolu galtootaa kan sadarkaa addunyaa mirkaneessee jira.
Guyyaa kaleessaa immoo koolu galtoota lammiiwwan Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa 120, yaballi isaan ittiin adeemaa turan gara andaara galaana Yemenitti akkuma siqeen kanneen namoota seeraan ala deddeebisan dargaggoota kolu galtootaa galanatti darbanii kanneen 50 ol ta’an du’uu isaaniif balaa guyyaa lamaan mudateen lubbuun namoota 69 darbeera..
Kanneen balaa kana irraa baraaraman angawoota IOMtti akka himanitti namoonni seeraan ala nama deddeebisan sun akkuma dachii Yemenitti siqaa deemaniin sodaa angawoota Yemeniif jecha galaana bubbeen raasaa turetti darban jedhan.
Jarmayaa koolu galtoota sadarkaa addunyaaf dubbi himtuu kan ta’an Olivia Headon VOAf akka ibsanitti koolu galtoonni sun akka du’uu danda’an beeku turan, garuu dura dhaabachuuf gargaarsa hin qaban turan.
Namoota seeraan ala kan deddeebisu keessaa dura bu’aa isaanii kan koolu galtoota kana ajajutu ture. Garuu kanneen biroo akka isaa yabalattii irraa hojjetan kanneen qawwee fi meeshaalee ka biroo hidhatan qaba. Egaa koolu galtoonni sun filannoo qabu. Ykn imala kana irratti miidhaan irra ga’ee ol miidhamuu, ykn itti dhukaasamuu ykn immoo galaanatti utaalanii liqimsamuu dha. Kaan isaanii galaanatti kan darbatamanis jiru jedhan.
IOM akka jedhutti namoonni 29 du’anii, 22 achibuuteen dhabamee ykn immoo isaanis liqimsamaniiru. Hedon akka jedhanitti namoonni 42 hojjettoonni IOM utuu isaan hin dhaqqabin naannoo galaana Sanaa dhiisanii deemaniiru. Koolu galtoonni baraaraman kanneen 27 ta’an dubartoonnii fi dhiironni kanneen umuriin isaanii naannoo waggaa 16 ta’u wal’aansa fayyaa fi kan kan sammuu argataa jiran jedhaniiru.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan namoota sana galanatti naqanii namoota itti dabalaa yabala balaa geessisuu danda’u irratti fe’anii deebi’uuf gara Somaaliyaatti deebian jedhu Headon.